Inetlọ ọrụ imechi ogige ntụrụndụ na zoos - Thrilltalk.com
Home/Nieuws/Inetlọ ọrụ ga-emechi ogige ntụrụndụ na zoo
Ndị kabinet ahụ anọkọla na Catshuis kemgbe elekere iri nke ụtụtụ iji nweta ndụmọdụ gbasara ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ọrịa corona. N'izu na-abịa, Rutte ga-ewepụta usoro siri ike n'ọgụ megide ibili onu ogugu enwere oria. A na-anụ ụlọ ahịa na-enweghị isi na ebe na-agafe agafe ka emechie.
Nkeji 13 gara aga
Mmechi maka ọnọdụ mbufe
Sinima, ogige ntụrụndụ, zoos, a ga-agbakwunye ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ọdọ mmiri na-esote, dị ka 'Hague isi' pịa ogbako a gwara ha ka ha mechie. Gọọmentị na-elekwa mba ndị gbara anyị gburugburu maka usoro ndị ahụ. Germany ekwuputala otu usoro. Naanị ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ọgwụ ga-emeghe ebe ahụ n'oge na-adịghị anya. Ugbu a amabeghị ma ndị omeiwu ahụ ga-eme nke a na oke Netherlands.
Na mgbakwunye na Prime Minister Rutte, Deputy Prime Minister De Jonge (Health Public), Ollongren (Internal Affairs) na Schouten (Agriculture) nọ na Catshuis Council taa. Ndị ozi Slob (Mmụta), Hoekstra (Ego), Koolmees (Ọha), Van Ark (Nlekọta Ahụike) na Grapperhaus (Ikpe ziri ezi na nchekwa) nọkwa ebe ahụ. Onye nduzi RIVM bụ Jaap van Dissel na-emelite ha.
A na-atụ anya na nke ọhụrụ Corona jikoro echi na Tuesday ka a ga-atụle ma kwadebe. Prime Minista Rutte na Minista De Jonge ga-ekwupụta ihe ndị ahụ na mgbede Tuesday n'oge ọhụrụ pịa ogbako.
Ìgwè mmadụ na Efteling
O yiri ka ọtụtụ ndị hụgoro ọbịbịa a ma gbalịa isonye otu ụbọchị n'ogige ntụrụndụ. N'oge a ọ na-arụsi ọrụ ike na Efteling ma enwere oge ichere oge nke 55 nkeji na ebe nkiri. Flying Dutchman na Baron 1898 na-ebili n’elu ya na nkeji iri asaa rue iri asatọ na-eche njem.
Duitsland Na-agbatị Grapperhaus Hoekstra ụlọ Akwa Tit nha pịa ogbako Slob
Efteling izu na Kruidvat